MSU Promotion For Group 1 (13.11.2018) — Steemit
MSU Promotion For Group 1 (13.11.2018)
dpakyaw (57)in #msu •3years ago
MSU Group 1 ( 13.11.2018) အတွက် Promo ရရှိသူများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ Group 1 မှ မိမိရေးသားတာသော Post များ Promo တွင်မပါခဲ လျှင် Comment တွင် မိမိ Post Link နှင့် MSU No များရေးထားပေးပါ။ Admin/ Co-Admin/ Member များအတွက် သက်ဆိုင်သည့် Rule များကို ယခု Link ဖတ်ရှူပါ။ Facebook မှ မJoin ရသေးသည့်
MSU Member များ ယခု Facebook MessagerLink ကနေ ဆက်သွယ်ပေးပါ။
msu no 022 @aggamun To Upvote Link
msu no 007 @khaylay To Upvote Link
msu no 003 @hnineikhaing To Upvote Link
msu no 016 @kyawzinwin14 To Upvote Link
msu no 032 @komgthet To Upvote Link
msu no 084 @evernew To Upvote Link
-Active မဖြစ်သော Member များကိုလည်း အမြဲ ရှာဖွေပြီး ထုတ်ပယ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ၄င်းနေရာတွင် လူသစ်များကို အစားထိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
-မိမိ Post သည် Promotion တွင်ပါဝင်သော်လည်း Upvote နည်းလျှင်(Lower 25 Upvote) အောက်ဖော်ပြပါ Screen Shoot နှင့်အတူ ယခု Facebook MessagerLink သို့တိုင်ကြားနိူင်သည်။
-Promo post များသည် Copy များရယူရေးသားထားပါ မူရင်း post Link နှင့်အတူ Comment ပေးခြင်းဖြင့်တိုင်ကြားနိူင်သည်
-2 ရက်တစ်ကြိမ် Round Promo ဖြစ်သောကြောင့် အရည်အသွေးမှီသည့် Post များသာ လက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယခု Link မှာ လေ့လာပါ
-စုစုပေါင်း (၃) ကြိမ် အရည်အသွေးမမှီသည့် Post များတင်ပါက MSU အဖွဲ့မှ ထုတ်ပယ်ခံရမှာဖြစ်ပါသည်
Help line- 09451104040, 09795292441, +1940902927447
Founder @ Myanmar Steemit User
#myanmar #steemit #esteem #promotion
3 years ago in #msu by dpakyaw (57)
Good Luck! admin Thz 👍
Congratulations @dpakyaw! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :
Congratulations @dpakyaw! You receivedapersonal award!
@dpakyaw, sorry to see you have less Steem Power.